Defedger နှင့်အတူ LED Lighted ရေချိုးခန်း Frame Mirror, ရွှေ
ပစ္စည်းအမှတ်. M-965 Frame ပစ္စည်းငွေရောင် LED LED Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်, ချေးဆန့်ကျင်သောအရွယ်အစား 600 * 1200mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60CE RoHS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် H UL ETL CETL CE5မီလီမီတာငွေကျောထောက်နောက်ခံမှန်အရောင်: ရွှေပစ္စည်းများ: သတ္တုနှင့်…
စတုဂံမှန်ဘီလူးမှန်ဘီလူး LED နှင့်အတူရေချိုးခန်း Makeup ကြေးမုံမီး
ပစ္စည်းအမှတ်. M-1039 Frame ပစ္စည်းငွေရောင် LED LED Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအရွယ်အစား 1200 * 750mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60CE RoHS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် H UL ETL CETL CE5မီလီမီတာငွေကျောထောက်နောက်ခံမှန်ပစ္စည်းများ: သတ္တုနှင့် Acrylic ဘောင်ကပြုလုပ်သည်။
LED Lighting နှင့် Defogger ပါသော Tall Medicine Cabinet
ပစ္စည်းအမှတ်. M-1022 Frame ပစ္စည်းငွေရောင် LED LED Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအရွယ်အစား 800 * 700mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60Hz အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် UL ETL CETL CE CE RoHS သည်အသုံးပြုသူများကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ရှေ့ဘက်မှပေါင်းစည်းထားသော…
2、LED Lighted ရေချိုးခန်းမိတ်ကပ် Mirror နှင့် Sensor Touch Switch တို့ပါ ၀ င်သည်
ပစ္စည်းအမှတ်. M-1013 ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းငွေရောင် LED ကြေးမုံ 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအရွယ်အစား 800 * 1100mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60Hz လက်မှတ် UL ETL CETL CE CE RoHS အသိအမှတ်ပြုအမျိုးအစား: LED Light Switch နှင့်အတူကြေးမုံ: ထိတွေ့ခလုတ် /
စတုဂံရေချိုးခန်း Defogging နှင့်အတူကြေးမုံ, Brushed ကြေးဝါ
ပစ္စည်းအမှတ်. M-956 Frame ပစ္စည်းငွေရောင် LED LED Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအရွယ်အစား 700 * 900mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60Hz လက်မှတ် UL ETL CETL CE CE RoHS အသိအမှတ်ပြုအရည်အသွေးမြင့်တာရှည်ခံသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် Brushed brass finish …
Mirror 5mm copper free and lead free silver mirror fingerprint-free for mirror frosted area Size 500mm,600မီလီမီတာ,700မီလီမီတာ,800mm Lamp 5050 high output SMD Led stripes Light source 3000K-6000K/24lm/pcs,60pcs/m 14W/m,အော်>80,long hours of 50000h LED driver UL listed,CE certificate,IP44 Certificate UL/cUL, CB, CE, RoHS certificates,with 2years warranty More functions for option -Custom shape,…
Frosted Frosted Sand Blasting LED Mirror
ပစ္စည်းအမှတ်. M -972 Frame material Frameless Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်မှုအရွယ်Φ700mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60အကောက်ခွန်ရှိသောကြေးမုံအာရုံခံခလုတ်ခုံ / လိုင်းရွေ့လျားမှုအတွက် Hz အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် UL ETL CETL CE CE RoHS အသိအမှတ်ပြုရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများ။
သံမဏိကိုယ်ထည် LED Mirror Copper ကိုအခမဲ့ Silver Glass ကိုကြေးမုံ
ပစ္စည်းအမှတ်. M -956 Frame material Brushed titanium gold ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိကိုယ်ထည် Mirror 5mm copper free silver mirror, အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအရွယ်အစား 700 * 900mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60CE RoHS အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို UL ETL CETL CE CE RoHS အသိအမှတ်ပြုသည်။
အပြည့်အဝ Lenth Framless တစ်သင်းလုံးကကစားသမား LED ကြေးမုံ
ပစ္စည်းအမှတ်. M -939 Frame material Frameless Mirror 5mm ကြေးနီအခမဲ့ငွေမှန်, ချေးဆန့်ကျင်သောအရွယ်အစား 450 * 1500mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60အကောက်ခွန်ရှိသောကြေးမုံအာရုံခံခလုတ်ခုံ / လှုပ်ရှားမှုခလုတ်အတွက် Hz အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် UL ETL CETL CE CE RoHS အသိအမှတ်ပြုရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများသည် Led digital …
အနိမ့်စျေး Bath Anti Fog LED Mirror Acrylic Frame
ပစ္စည်းအမှတ်. M -010 frame ပုံ Acrylic frame Mirror 5mm copper free silver mirror, ချေးဆန့်ကျင်သောအရွယ်အစား 500 * 700mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60အကောက်ခွန်ရှိသောကြေးမုံအာရုံခံခလုတ်ခုံ / လိုင်းရွေ့လျားမှုအတွက် Hz အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် UL ETL CETL CE CE RoHS အသိအမှတ်ပြုရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများ။
ပစ္စည်းအမှတ်. M -009 frame ပုံ Acrylic frame Mirror 5mm copper free silver mirror, ချေးဆန့်ကျင်သောအရွယ်အစား 500 * 700mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60အကောက်ခွန်ရှိသောကြေးမုံအာရုံခံခလုတ်ခုံ / လိုင်းရွေ့လျားမှုအတွက် Hz အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် UL ETL CETL CE CE RoHS အသိအမှတ်ပြုရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများ။
ပစ္စည်းအမှတ်. M -1031 Frame material Solid Ash wood Mirror 5mm copper free silver mirror, anti-corrosion Size 900*700mm, စိတ်ကြိုက်အလင်းအရင်းအမြစ် 5050, 2835 LED ချွတ်, အော်>80, အော်>90, 3000k / 4000k / 6000k ရရှိနိုင် Input ဗို့ AC100-240V, 50/60Hz Certificate UL ETL CETL CE CE RoHS certificated Optional Functions For Custom Mirror Sensor switch/Motion switch…